Ziva pla yokunyorera 3D akadhindwa zvinhu - China Cixi Lanbo Printing
Ziva pla zvinhu nezvinhu 3D akadhindwa
Vatengi vakawanda neshamwari vanondibvunza kana pla mapurasitiki? Herino ine hurukuro pane pla nhasi.
Pla ndiye Chirungu chidimbu kubva polylactic acid, zvakanyorwa se: polylacticacid. Polylactic asidhi (pla) iri yokufungidzira biobased uye biodegradable zvinhu yaigadzirwa starch mbishi zvinhu dzataurwa nokuda renewable chirimwa pfuma akadai zviyo. The starch mbishi zvinhu inotengwa nevanhu saccharification kuwana shuga, uye zvadaro Shuga uye mumwe tisawirirane vari yakaviriswa kubudisa mukuru-kuchena lactic acid, uye ipapo mumwe samolecular uremu polylactic asidhi iri synthesized nemakemikari kwetunhu. Ane biodegradability zvakanaka. Pashure kushandiswa, unogona akafumuka zvachose tusingaoneki zvakasikwa pasi zvimwe zvinhu, uye pakupedzisira inobereka kabhoni yakasviba uye mvura chisingazivi anosvibisa mhoteredzo. Izvi zvinobatsira chaizvo kuti zvakatipoteredza uye anozivikanwa nezvinoiswa ane zvakatipoteredza noushamwari.
Mushumo vakagumisa kuti migumisiro mutobvu, mekuri, cadmium, chromium, biphenyl, uye diphenyl Eteri vaiva kunoenderana-gore 11 EU nomurayiro uri kushandiswa kukunyimai zvinhu, uye migumisiro mharidzo 001 havana dzakaonekwa. ND ari Not dected.
Ose pamusoro kuongorora anoratidza kuti pla ari mashoko akanaka, asi chikafu kuchengeteka zvechokwadi kunetseka zvikuru vose, kana ngwarira.
Regai titaure pamusoro zvimwe zvikanganiso uye yakavanzwa ngozi pla. Chokutanga, pla haasi husingakwanisi mukuru tembiricha, uye rinonyanya inotanga deform kumativi 60 °. Sezvo zvokudya muforoma nayo, inofanira kuva chando zvakaipa; Pla zvinhu zvinogona akafumuka, inova nani uye kuvamirira. Kunyange zvazvo zviri zvakatipoteredza ushamwari, zvinoda 3D yokudhindwa chigadzirwa-mugiredhi zvinhu. Kunogara chinhu pfupi bhodhi; ari nokudhinda, nokuti mukuru-tembiricha utsotso, zvichaita kudzivirira nezvimedu, kunyange zvacho pachavo vari dzisiri chepfu, asi ichi ndicho zvishoma akafanana PM2.5, refu kufema kana zvimwe kukuvara yevanhu nemapapu, Naizvozvo 3D rokudhinda nzvimbo iri iya ventilated.
Naizvozvo, pla chinhu zvinhu zvakatipoteredza noushamwari kuti wose anogona kushandisa nechivimbo.
Simbe dumpling kwebhokisi
Pakupedzisira achishevedzera masirogani, ruzivo anoshandura upenyu, 3D kudhinda kubva zviroto chokwadi!